I-W.Last - Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu nge-Sonication - Hielscher Ultrasound Technology
W.Last yinkampani enolwazi oluseNingizimu Afrika, olugxile ekwakhiweni kwezingqimba ze-premium kanye nama-tinctures avela ku-botanicals. I-W.Last isebenzisa isizinda se-ultrasonic ekwakheni izitshalo zazo eziphezulu, ezisetshenziselwa ukwelashwa, ukunambitheka kokudla kanye nezimonyo namafutha.
I-W.Last ibilokhu ibhizinisi iminyaka engaphezu kwengu-100 futhi isazi uma kuziwa ekukhiqizeni izitshalo ze-premium ezivela ku-botanicals ezifana namakhambi nezitshalo zokwelapha.
'Sikholelwa ukuthi yiyena kuphela inkampani eNingizimu Afrika engakwazi ukukhipha ama-botanicals emithonjeni ehlukahlukene yabezindaba. Ngokomlando, sisebenzise i-ethanol, njengezinye izinkampani eziningi. Noma kunjalo.Kukhona okuphambili kwesikhumba se-hydroglycerol, okubili kokubili i-ethanol- ne-sugar-free, kanye nama-extracts asepropylene glycol asetshenziswe ngokuyinhloko kumafutha, izimonyo kanye nezimboni ze-vape. '
Izitshalo ze-Premium liquid zikhona ethanol 62%, imifino glycerine 80% noma ipropylene glycol 80%.
'Sinemiphumela engaphezu kwengu-20 ekukhipheni izinto zokuqala ze-herbal ne-homeopathic. Kukhona neze igebe emakethe yezingqikithi ze-botanical ezithinta okuhle nokugqamile okwenziwe ngokujwayelekile. Sitshale imali enkulu ekunqumeni ubuchwepheshe obunqenqemeni ukuhlangabezana nezidingo zemakethe futhi sikholwe yiW.Last yiyona kuphela inkampani ezwekazi lase-Afrika esebenzisa ubuchwepheshe be-ultrasonic ye-extrabric plant. "
Iziqephu ezisekelwe e-Ethanol zenziwe ngendlela efanayo ngendlela engaphezu kweminyaka engu-200. Nakuba i-tincture e-ethanol esekelwe kakhulu futhi inezici eziningi ezinhle, ukunambitheka akujabulisi futhi amaphesenti aphakeme e-ethanol awafaneleki izingane nezinhlelo eziningi zenkolo. Ukuze unqobe lezi zinselele, iW.Last iye yasungula i-ethanol-free, i-sugar free-extra extraction.
'Izivivinyo zokuqala lapho kunesidingo kodwa isikhathi sokuqothula sasiyisikhathi eside esenza ukuthi ukusebenza kwezebhizinisi kungabonakali. Ngakho-ke, siseshe umhlaba ngobuchwepheshe obufanele futhi sathola i-ultrasound evela ku-Hielscher eJalimane. U-Hielscher usisize ngokwenza ngokwezifiso umshini wokwenza umshini kanye nokwenzela izidakamizwa okwenza ukukhishwa kwamaphesenti angu-20 kunamandla kunezindlela ezivamile kanye nengxenyana yesikhathi esivamile. '
Izinto zokuqala zemithi kanye nezinto ezikhishwe zihlolwa yi-laboratory yesithathu. Ngenxa yalokho, i-W.Last ikwazi ukulinganisa indlela yokukhipha futhi ihlolwe amandla okuqhathaniswa namazinga wangaphambilini.
W.Last inkampani encane enezinhloso ezinkulu zokukhula. Igcwalisa igebe emakethe lapho amakhasimende, adinga khona izinto eziningi zokwakheka kwezihlahla zezitshalo, kudingeka adinde izikhathi eziningi zokuhola zokudiliva ngamazwe ngamazwe.
'Sinamasheya ezinhlobonhlobo ezinkulu nezinqwaba ze-botanicals futhi sinokuqhathaniswa okungaphezu kwe-350 esitokisini. Uma singenayo ivolumu ukuze sihlangabezane nezidingo zamakhasimende, sizokwenza masinyane ukukhiqiza ubuningi, okuthatha okungaphansi kweviki ngokwesilinganiso '.
Amakhasimende azuzi nje kuphela isikhathi esincane sokuhola lapho ehlelwa kusuka kuW.Last, kodwa futhi anenzuzo yokuphila okuphelele kwelethilethi.
W.Lwesibili – Ukukhiqizwa kwezinga lokukhiqiza izitshalo nezitshalo. Uma unesithakazelo kuma-extracts e-W.Last premium, sicela uxhumane nabo:
I-UIP1000hdT AT W.Lwesibili Amakhemikhali amakhemikhali okulungiselela ukukhishwa kwama-extracts.
40 Eqinisweni Road North
I-Premium Botanicals evela kuW.Last – ekhiqizwa ngokusebenzisa isizinda se-ultrasonic